Seranana Atsanbingo : Tsy ahazoana antontanisa mazava ny voamboana | NewsMada
Seranana Atsanbingo : Tsy ahazoana antontanisa mazava ny voamboana
Seranan-tsambo kely iray Atsanbingo ao Mahajanga, no fihantsonan’ireo botry madinika mpitatitra entana mandroso sy miverina any amin’ireo kaominina manodidina misy ranomasina na renirano ao amin’ny faritra Boeny. Hita misavovona miantsona eo amin’io seranana kely ireo karazan-kazo fampiasa amin’ny trano sy fanaovana fanaka. Hita betsaka ho an’izay fanamboarana fanaka izay ny voamboana (palissandre). Tsy ahazoana antontanisa mazava anefa momba ireo karazan-kazo tonga eo amin’io moron-dranomasina io.
Misy ihany ny fotoana fandalovan’ny solontenan’ny mpiasan’ny sampandraharahan’ny ala avy ao amin’ny faritra, maka tamberim-bidy fa ny hazo tena voatrandraka miala any am-potony tsy fantatra mazava, toy ny avy any Soalala, Marosakoa, Mahajamba. Mahalana ny tatitra momba izany miainga any amin’ireo kaominina ireo sy ny faritra hatrany amin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny ala.
Tsy latsaky ny 20 ireo botry madinika mpitatitra hazo sy entam-barotra hafa miala ao Mahajanga mankany amin’ireo kaominina manodidina, faritra Boeny. Manome asa maro ny fitateran-kazo. Ankoatra ireo mpitatitra izany an-tsambo, ao ireo mpivarotra mpamongady efa manana kaomandy mialoha; ireo mpibata miampy ireo mpitatitra amin’ny sarety na posy.
Ilàna fanavaozana amin’ny lafiny maro ny fitateran-kazo ataon’ireo sambo ireo, manomboka any amin’ny toerana nialany sy ny fanaraha-maso eo amin’ny fahatongavany. Tokony hisy antontanisa mazava momba izany mba handraisana fepetra ho fiarovana ny ala.